Roller Shutter Grill Door China Manufacturers & Suppliers & Factory
Roller Shutter Grill Door - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Roller Shutter Grill Door ထုတ်ကုန်များ)
အတွင်းပိုင်းမြန်နှုန်းမြင့် PVC Hot-Door တံခါး
အတွင်းပိုင်းမြန်နှုန်းမြင့် PVC တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2 mm. Function:insect...
Flexibleရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါးတံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သင်၏မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုလာယူပါ။ highရာမမြန်နှုန်းမြင့် PVC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါး (Oversize Hangar တံခါး) သည်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သာမကသင့်အတွက်စူပါမားကက်၊ ဆေးဆိုင်၊ တံခါးဖွင့်ရန် /...
Flexibleရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါးတံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအရာသည်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အသက်၊ အချိန်သည်ငွေဖြစ်သည်။ highရာမမြန်နှုန်းမြင့် PVC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောတံခါး (Oversize Hangar door) သည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊...
Roller Shutter Grill Door Roller Shutter Door Aluminum Roller Shutter Door Galvanized Roller Shutter Door Transparent Roller Shutter Door Roller Shutter Stacking Automatic Roller Shutter Commercial Crystal Door Automatic Crystal Roller Shutter Door